I-Metaverse ilapha, kwaye uphakathi kwabatyali-mali bokuqala | Klever ezezimali
I-Metaverse ilapha, kwaye uphakathi kwabatyali-mali bokuqala
Kukholelwa ngokubanzi ukuba i-2022 iya kuba yindawo yokuguqula iMetaverse kwaye ukuba uyakholelwa kwi-crypto, sele ukwisihlalo somqhubi.
Ngeentsuku zokuqala zemithombo yeendaba zentlalo, ndandinomdla kumbono wokunxibelelana nabanye, ukuthumela iividiyo, imifanekiso, ukwabelana ngeendawo, nokunye okuninzi. Kwaye ngoku, sithetha ngeMetaverse.
Enyanisweni, iteknoloji ibonakala ingayeki ukumangalisa.
Ndikhumbula kwakhona ngo-2018 ndabukela ifilimu kaSteven Spielberg ethi "Ready Player One" ndicinga: "Jeez, le nto yeVR inokuhamba ngaphaya kokucinga". Yayisoyikeka kwaye kwangaxeshanye inika umdla. Ndandingazi ukuba kwiminyaka nje emibini, ingcamango yale movie yayiza kuzaliseka.
Kakade ke, ingcamango yenyani ngokwayo yayingeyonto intsha. Kodwa uninzi lwethu aluzange lulindele ukuba enye yeenkampani ezinkulu zetekhnoloji emhlabeni iza kuzisa oku kuluntu ngokukhawuleza.
I-Facebook yaba yiMeta, kwaye ngoku sinokufikelela ngokusondeleyo kunangaphambili kwihlabathi i-Spielberg evezwe kwifilimu yakhe (nangona ingekho kunye nehlabathi elingenamanzi, elingenamanzi).
Ke, ukuba awukayiboni le movie okwangoku, ndiyincoma ngokwenene. Eli nqaku linokulinda wena. Yiya, uyibukele kwaye ubuye - uya kubona ngendlela ebonakalayo ukuba iMetaverse inokuba yoyikeka njani, yoyike, kunye nehlabathi elikhulu lamathuba angenasiphelo.
Ukuba ububukele, makhe siphonononge okuzakwenzeka ngo-2022 kwaye sibone ukuba uSpielberg wayenyanisile na kuqikelelo lwakhe.
Sele sityala imali kwiMeta
Ekubeni uZuckerberg ebhengeze utshintsho kwiMeta, isihloko asizange siyeke ukuthetha.
I-Meta sele itshintsha umdlalo kugqatso olungekaqalisi. Amandla obuchwepheshe akhawuleza kwaye anamandla. Kakade ke, ihlabathi lonke sele lifudumeza iinjini zalo ukuba libe yinxalenye yolu khuphiswano.
Nangona kunjalo, ezinye iinkampani bezisoloko zikholelwa kwihlabathi ledijithali elinamaxabiso edijithali. Iinkampani kunye nabasebenzisi abasele bethathe ii-asethi ezibonakalayo kwaye balumkise wonke umntu okwethutyana: "thembela kwinguqu yedijithali - ifikile kwaye iyeza".
Kwaye ukuba ufunda oku, mhlawumbi ukwinyathelo elinye phambili elugqatsweni kuba ungomnye wabo. Ewe, sithetha nge-blockchain kunye ne-cryptocurrencies.
Ngempahla yedijithali, le ndalo iphela kunye nabahlali bayo sele betyala imali kwaye basasaza igama lokuguqulwa. Kwaye ngoku, xa kuya kubakho indalo epheleleyo esekwe kwizinto ezibonakalayo, i-asethi yedijithali iya kuba sisitshixo sokuvula into oyifunayo kwaye kufuneka uphile kuyo.
Makhe sicinge ngale ngqiqo okomzuzwana:
Uhlala kwihlabathi ledijithali apho yonke into (impahla, i-real estate, izibonelelo, njl njl) ikwifomu yedijithali, apho oorhulumente abaqhelekileyo bengenalo ukubamba okufanayo kuyo, kwaye wonke umsebenzisi unokunika oko anako ngokuthe ngqo komnye.
Ikhalisa naziphi na iintsimbi?
Ayisiyiyo kuphela sithetha ngezakhiwo ze-blockchain kodwa sithetha ngemvakalelo entsha yalo mmandla: i-NFTs. Ngokwenene, i-metaverse isondela kufuphi ne-NFTs, njengoko yonke into ifuna ukuthengiswa, ukuthengwa, kunye nokuthengiswa kule nto, siya kuthi, inkqubo entsha yezoqoqosho.
Ngokuqinisekileyo uya kufezekisa iinjongo zakho ngokukhawuleza kwi-Metaverse ukuba uqala ukutshala imali kuyo ngoku. Ii-NFTs ziya kuba yile nto kufuneka uyithenge - kwaye imali ye-crypto ngokunokwenzeka iya kuba yindlela oza kuzithenga ngayo.
Yintoni elandelayo kwiMetaverse ngo-2022?
Njengoko kukhankanyiwe ngaphambili, kukho amathuba aphezulu okuba lo nyaka uya kuba ngunyaka oqhumayo we-NFTs kunye nesiqephu esiphezulu seMetaverse.
Thatha nje umzekelo into esandula kuyenza yi-Samsung: benze amava e-intanethi abizwa ngokuba yi-“My House” apho uya kuba nakho ukuhombisa ikhaya elibonakalayo (molo, Metaverse!), Ngezixhobo zombane kunye neemveliso eZepeto, ilizwe lenyani laseKorea.
UYungwoong Kwon, umphathi weziko lentengiso ye-Samsung Electronics, uthe:
"Indlu yam inika abasebenzisi ithuba lokuqhelana neemveliso zeSamsung kunye namava eendlela zokuphucula kunye nokwenza amakhaya abo alungele".
'Indlu yam' yeSamsung eZepeto (ityala: Samsung)
Olunye udaba olumnandi ekuqaleni kwalo nyaka yayiyileta yoNyaka oMtsha evela kumongameli weSquare Enix, umpapashi weFinal Fantasy.
Kwimixholo yeleta, uYosuke Matsuda wabelane ukuba metaverse, NFTs, blockchain imidlalo, kunye nedijithali uphawu-based economies “apha ukuhlala” kwaye wabonisa inkxaso kwezi teknoloji zivelayo, ecacisa ukuba le inokuba yenye yeendawo zotyalo-mali lwenkampani. 2022.
UMatsuda naye wathi:
"U-2021 ayingo 'Metaverse: Year One' kuphela kodwa ikwa'NFTs: Year One' kuba ibingunyaka apho ii-NFTs zahlangatyezwana nolangazelelo olukhulu."
I-CNBC, i-portal yeendaba zemali, yongeza ukuba:
"U-2022 ulungele ukuba ngowona nyaka mkhulu okwangoku "we-metaverse," njengomzali kaFacebook iMeta, iApple, iMicrosoft kunye neGoogle izixhobo zokukhupha iimveliso ezintsha zehardware kunye neenkonzo zesoftware kule nto ukuza kuthi ga ngoku ibiyimakethi ye-niche yabamkeli bokuqala.
I-Crunchbase ikhuphe inqaku ukwabelana ukuba "i-10 yeebhiliyoni zeedola kwinkxaso-mali yelinge iya kumbono we-Metaverse esele ikhona kulo nyaka kunye nokubheja okuphezulu ngabadlali beBig Tech". Nangona kunjalo, "abo bakwishishini bathi imali eninzi kakhulu ikulungele ukuqukuqela ukuya kuqalo olusebenzayo ukuzisa ihlabathi elisebenza ngokwenene ebomini".
Ngokutsho kweCrunchbase, imeko yenkxaso mali sele inje:
Imidlalo: malunga ne-7.5 yeebhiliyoni zeedola (imijikelo engama-382)
Imidlalo ye-Intanethi: malunga neebhiliyoni ezi-2.5 zeedola (imijikelo eyi-110)
Inyani eyongeziweyo: malunga ne-2.1 yeebhiliyoni zeedola (imijikelo eyi-176)
Ihlabathi elibonakalayo: i-62.8 yezigidi zeedola (imijikelo eyi-9)
Ubunyani benyani buyamangalisa kwaye sele buphakathi kwethu
Iinjongo zabatyali-mali abaninzi abafuna indawo elangeni kukutyala imali kwi-crypto kunye ne-blockchain ngokuchanekileyo ngenxa yento esele siyixubushile kweli nqaku: kwixesha elitsha ledijithali, iimpahla zedijithali kunye neendlela zokuzithenga ziya kubaluleka.
Ngokufanayo, inqaku elikhankanyiweyo ligxininisa ukuba itekhnoloji ye-blockchain inokwenza abasebenzisi bakwazi ukugcina isazisi esingaguqukiyo kuyo yonke i-metaverse. Njengomzekelo, umntu unokuba nesazisi esingaguqukiyo ngelixa ehamba ukusuka kwindalo yeRoblox ukuya kwindalo yonke yaseFortnite.
Thina, abatyali-mali be-crypto, sele befakwe kule ndalo entsha kuba sonke sikholelwa kwi-digital revolution.
Unokuzijonga ngokulula njengomboni ngenxa yokuba sele uyibonile into abaninzi abangekayiboni: ilizwe elitsha eliphuculweyo lamathuba ngaphakathi kokwenyani.
Kufuneka sikhumbule ukuba abantu abaninzi basenoloyiko kwaye bengaqinisekanga malunga ne-cryptocurrencies kunye neteknoloji ye-blockchain ngokubanzi kwaye ngokuchaseneyo sibheja kubo. Ukuthathela ingqalelo ukuba iintambo ziphezulu, yiloo nto eyenziwa ngababoni: babona into enokwenzeka kwaye ababizintloni ngayo – baya ngakuyo.
Kwaye siyenza ngenye yezona zinto zitshintshayo zikhoyo, apho yonke into idityanisiwe kwaye ifakwe ngokupheleleyo kwezo zinto zinokwenzeka.
Klever imalunga nokusungula indawo yeMarike ye-NFT, ine-blockchain yayo kunye ne-crypto yethu KLV - singasathethi ke ngeWallet yethu, Tshintshiselwano, nayo yonke enye into esiyenzileyo nesisazoyenza.
Ndiyathetha, ukuba oko akuboni ngaphaya, andazi ukuba yintoni.
Ke, nokuba yonke le nto ayilandeli kanye into ebesiyilindele (ebonakala ngathi ayinakwenzeka), sinokuthi sibone isahluko somdlalo wetekhnoloji sisenzeka kanye phambi kwamehlo ethu kwaye sithathe inxaxheba ngokukhutheleyo kuyo kunye ne-ecosystem.
Oku kusilethela amava akhethekileyo kuphela kodwa kunye nengqondo enkulu yomtyali-mali eya kusikhokelela kwimpumelelo engakumbi kwixesha elizayo.
Ngoko, yiba Klever, kwaye masibukele uvukelo lwenzeka kunye nakwisihlalo esingaphambili.
Akukho kalo 4.82 Iivoti: 22
Ukutshintsha kweSOL kuyafumaneka Klever yiprojekti
USolana, owaziwa ngokuba ngu-Ethereum killer, ngoku ungomnye weeprojekthi eziphezulu ze-crypto ze-10 abasebenzisi abanokuzibamba. Klever Tshintsha.
Ngaba uDoge uguqulele kwiShiba Inu?
Ngenxa yokufana kwe-brand, indlela, kunye nabaphulaphuli, abantu abatsha kwi-crypto market bayazibuza, ngaba u-Doge uguqulele kwi-Shiba Inu?